बुढा बा को समस्या :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
बुढा बा को समस्या
एकजना बुढा मान्छे मेडिकल स्टोरमा गएर पसलेसँग भियाग्रा मागेछन् ।
पसले: कतिवटा दिउँ बा ?
बुढा : आधा मात्र दिनुस् ।
पसले : त्यतिले त राम्रोसँग काम गर्दैन नि बा ।
बुढा : होइन, मलाई आधा मात्र दिनुस् ।
पसले : मैले भने नि बा, आधाले त राम्रोसँग काम गर्दैन ।
बुढा : हत्तेरिका बाबु, मलाई आधा मात्र दिनस् । म ८० वर्षको बुढोलाई त्यस्तो काम गर्न चाहिएको हो र ?
पसले : अनि किन त ?
बुढा : पिसाब फेर्दा जुत्तामा नपरोस् भनेर पो लिन खोजेको !!
प्रकाशित मिति : २०७२ असोज २९ (October 16, 2015)
• सुन्तलीलाई किस